jrefrmEdkifiHESifY ywfoufaom rdk;av0o? &moDOwk owif;rsm; (2)
Thread: [mm]jrefrmEdkifiHESifY ywfoufaom rdk;av0o? &moDOwk owif;rsm; (2)[/mm]
05-13-2013 02:32 PM #31
rkefwkdif;[m jrefrmjynf urf;&dk;wef; tenf;qkH;awmh &ckdifjynfe,f ppfawG armif;awm bufukd 0ifr,fqkdwm aocsmaeawmhum tckuwnf;u tultnDay;a&;awG twGuf ypfpnf;awGpk &efykHaiGawGpkxm; Mu&if aumif;rvm;vkdYyg/ jzpfwmeJY csufcsif;qkdovkd tenf;eJY trsm; tultnD ay;Ekdifrvm;vkdYyg/
akm, bago, Botazan, brokenworld, fridayborn, galladino, Grace, happyvalley, heronaing, honelay86, icy, Jim, Jin_kaleat, k-pooh, khit, KM Wai, ko too, Lynn Eainthu, mgknow, nyanmoe, oowatoke, redhat, RunAtServer, Salone, shadow69, tagumay, THARGYII, yokesoe
05-13-2013 03:25 PM #32
(Topical Cyclone Mahasen)Update.
ယနေ့ညနေ (06:00:00) နာရီတိုင်းထွာချက်များအရ။
တယ်။အခုဆိုရင်မုန်တိုင်းဟာအနွိယနိုင်ငံ Chennia မြို့အရှေ့ဘက်မိုင် (370)ခန့်အကွာ။
မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုးကျွန်းအနောက်တောင်ဘက်ယွန်း ယွန်း (525)မိုင်ခန့်အကွာ။
ထိုင်းမြေပြင်မိုးလေ၀ါသမြေပုံအရ လေဖိအားနည်းနေတဲ့နေရာတွေကတော့အနွိယတိုက်အပေါ်မှာ
တွေ့နေရပါတယ်။ 1004 hPa ပေါ့နော်၊ကဲမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာ ကတော့ 1006 hPa ရှိ
Date : 13 May 2013 0012Z(မြန်နာစံတော်ချိန်ည( 6:30:00)ချိန်တိုင်းထွာချက်။
Location : 12:22:30 N : 85:42:63E
Status : Cotegory 1
Movement : 10 mph
Maximum Win Speed :55 mph
Gust Speed :65 mph
Minimum central pressure : 985 hPa
Maximum significant wave height : 20 FEET
The storm surge is generally:4-5 feet above normal
Colour Type :Yellow
မြေပုံမှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကလေဖိအားကအနွိယနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းနှင့်ဘင်္ဂလာဒေ့စ်နိုင်ငံပေါ်ကလေဖိအားထိပိုမို
ကောင်းဒေသတ၀ိုက်နှင့်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြောက်ပိုင်း စွန်းလောက်သာမုန်တိုင်းသက်ရောက်မှုကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါ
East India coast pressure :1004 hPa 1006hPa
Rakhine coastline:1006 hPa
Bangladesh :1004 hPa
Mahasen ရဲ့ရာဇ၀င်လေးကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ခန့်မှန်း ရလည်းခက်တယ်။ပင်လယ်ထဲမှာအကြာကြီး
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသနှင့်၊တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဒေသေ တွမှာတော့ထစ်ချုန်းမဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လေပြင်းကျမဲ့ 
အခုည (07:43:00) နာရီက Mahasen ရဲ့ပုံရိပ်ပါ။
Mahasen မှာပါတဲ့မိုးရေချိန်ပါ။ အရောင်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးမိုးဘယ်လောက်ရွာမယ်၊ဘယ်နေရာမှာရွာနေတယ်။
Unit ကတော့ in/hr ပါ။
abya, AHHA, akm, august, bago, BananaBoy, Botazan, brokenworld, CupidBoyz, DD85, frank, fridayborn, galladino, Grace, happyvalley, honelay86, icy, Jim, jim beam, Jin_kaleat, k-pooh, KM Wai, ko too, Lynn Eainthu, mgknow, MNO.BN, myanmar0096, nnnaing, nyanmoe, NyoMar, oowatoke, peace777, pinkladylay, PiNyat, redhat, RunAtServer, Salone, shadow69, shoetilay, swarlay, tagumay, taurus22, THARGYII, thitmin, tiptop, Ygn Robert, yokesoe, zzz
05-13-2013 07:17 PM #33
Mahasen udk tifwmeufuae teD;uyf Munfh&IEkdifwJh link av;yg
abya, AHHA, akm, bago, chithninnwai, devilgrin89, Grace, heronaing, honelay86, icy, KM Wai, ko too, Kohtut, ktg, mgmgthan, MNO.BN, nyanmoe, oowatoke, PiNyat, purisa, redhat, RunAtServer, Salone, shadow69, swarlay, taurus22, tiptop, yokesoe
05-14-2013 02:14 AM #34
Thanked 10,482 Times in 652 Posts
tcktwdkif;utaNctaerqdk;avmufao;ygbl;/tck oGm;aewJUyHkpHrsdK;bJ'DaeUnaetxdawmifUcHxmygr[mqifa&/ NrdKUwdkif;&Gmwdkif;y&dwf&Gwf?uefawmUyGJxdk;wmeJUvlawGpdw fylaeMuygw,f/ tcknaeydkif;rS ta&SUaNrmufbufacgif;aocsmrapmif;cJU&ifawmU NrefrmbuftxdtcdkufeJoGm;ygbD/ b,frkefwdkif;rSawmUaumif;usdK;ray;ygbl;?b,fedkifiH xdxd pdwfraumif;ygbl;/bif;*vm;a'U uawmU &mZ0ifeJUcsDNyD;rkefwdkif;tawGUtMuHK&SdyD;om;yg/tJ'Dbufbif;*vm;a'UwdkU tdef'd,wdkUbufoGm;&ifawmUvJ ur®oumaygUAsm? ur®oum qdkwmuawmU ( umr onf oum uJUodkU csdKyg\_ ) wJU cif Asm
AHHA, bago, BH, brokenworld, devilgrin89, Grace, heronaing, honelay86, icy, k-pooh, KM Wai, ko too, Kohtut, ktg, mgmgthan, MNO.BN, nyanmoe, oowatoke, PiNyat, RunAtServer, Salone, shadow69, swarlay, thet2006, yokesoe
05-14-2013 02:40 AM #35
r[mpifu b,foGm;r,fqdkwm aocsmrSef;vdkYr&ao;yg/
tm;MuD;wJh rkefwdkif;tawmfrsm;rsm;[m tckvdkyJ yifv,fxJ vrf;ovm;avh&Sdygw,f/
awmif,drf;vdkuf? ajrmuf,drf;vdkuf...ywfcsmvnf ,rf;aewJhoabm/
'g aES;vmwJh vu©Pm/ tJhovdk ,drf;xdk;&if; aemufwpfqifh t&Sdef jyefjrefvmNyD qdk&ifjzifh
ol oGm;r,fh vm;&mvdkY ,lq&ygw,f/
tcsdKUuvnf; tm;aysmh? jyufys,fEkdifaumif;r,fvdkY xifMu&JU/
2008? em*pfwHk;uvnf; tvm;wl oa0xdk;aecJhzl;&JU/ yHkxJu rkefwdkif; eHygwf-1 [m em*pfyg/
odkYaomfvnf; uRefawmfu em*pfudk erlemtjzpfay;wmyg/ tjcm;ESpfawGrSm tckvdk yifv,fxJ vrf;ovm;wJh rkefwdkif;awG trsm;MuD;yg/
vwÅDusL'f 10--15? avmif*sDusL'f 95--85 Mum; pwifcJhwJh rkefwdkif; tawmfrsm;rsm;[m
ajrmufbuf (b*Fvm;a'h&Sf)eJY ta&SUajrmuf(jrefrm) bufudk 0ifavh&Sdygw,f/ vGefcJhwJh 10 ESpf twGif;aygh/
r[mpif[m jrefrmjynfukd vmcsifrSjzifh vmr,f/
enf;enf; aemufuscsifvnf;usr,f/ (ar-17)
MudKwifjyifqifrIawG? ae&ma&TUajymif;rIawGjzifh rvGJraoGvkyf&rSmyg/
academy, adaptor, AHHA, bago, BH, Botazan, brokenworld, chithninnwai, devilgrin89, fridayborn, Grace, heronaing, HlaingKaLayThin, honelay86, k-pooh, KaungKinPyar, KM Wai, ko too, Kohtut, ktg, Lynn Eainthu, mdychat, mgthitsar, MNO.BN, nyanmoe, NyoMar, oowatoke, Peach, PiNyat, redhat, RunAtServer, Salone, shadow69, swarlay, Thant Sin Htet, THARGYII, thet2006, thitmin, yokesoe
05-14-2013 03:36 AM #36
ယနေ့နံက်မြန်မာစံတော်ချိန် (06:30:00) နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း
Mahasen ဟာအရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်းဆီသို့စတင်ကွေ့ပတ်ပြီးကျွန်ေ တ်ာတို့ဘက်ကိုခရီးနှင်
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ (48)နာရီအချိန်ရပါသေးတယ်။ထိုအချိန်ဟာလုံလောက်သောအချိ န်ဖြစ်ပါစေ။
မုန်တိုင်းမ၀င်မှီ (24)နာရီကြိုတင်ပြီးတော့ Up Date လုပ်ပေးပါ့မယ်။
ဒီနေ့မနက် (06:30:00) နာရီအချိန်မှလမ်းကြောင်းစတင်ပြောင်းလဲလာသော Mahasen
မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့တိုက်ရိုက်မ၀င်လိုက်ပဲနယ်စပ်ဒေသကိုသာဖြစ်ကျော်ဝင်ရောက်မည့် Mahasen ခန့်မှန်းလမ်းကြောင်း။
အ၀ါရောစက်ဝိုင်းဟာ Mahasen ရဲ့သက်ရောက်မှုပါ။မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုပါတာများပေမဲ့မု န်တိုင်းဟာကုန်းတွင်းပိုင်း
ကိုစ၀င်လိုက်တာနဲ့တောင်များ၊သစ်ပင်များ၊အဆောက်အဦးများကိုတိုက်မိပြီး Resistance air foce ကိုဖြစ်စေပြီး
ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ (09) နာရီက NASA ဂြိုလ်တုကနေပြီးအနွိယနိုင်ငံအပေါ်သက်ရောက်နေတဲ့ Mahasin ကိုရိုက်
Mahasein မုန်တိုင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မိုးရွာသွန်းမှုသ က်ရောက်နေပုံပါ။
ဒီနေ့ကစပြီးမုန်တိုင်းသက်ရောက်မှုအနည်းအကျဉ်းကိုမြန် မာနိုင်ငံကစတင်ခံစားရပြီမုန်တိုင်း Colud swan တွေ
ကျွန်တော်မုန်တိုင်း UP DATE တင်နေစဉ် မိုးထစ်ချုန်းလာပြီးမိုးကြီးလေကြီးများကျလာသောကြောင့် ခဏရပ်လိုက်
abya, academy, adaptor, AHHA, Andrei07, bago, BananaBoy, blooom, Botazan, brokenworld, Chit Suu, chithninnwai, csmatti, CupidBoyz, cutiepie, daylight, domeno, DrJones, eggplant, frank, fridayborn, Grace, Heroman32, HlaingKaLayThin, Hollinaz, honelay86, icy, Jim, julykoko2009, KM Wai, ko too, Kohtut, Lynn Eainthu, malwaddy, mdychat, mhankyg, MNO.BN, Mod8, myanmar0096, nnnaing, nyanmoe, NyoMar, oowatoke, peace777, phyumoe, planetX, redhat, RunAtServer, Salone, shadow69, shankalay2007, stone, SuperPooh, tagumay, taurus22, THARGYII, thawzin, thet2006, thitmin, thudawzingyi, TUN2N, turtle81, Ygn Robert, yokesoe, YTN, zzz
05-14-2013 12:59 PM #37
( r[mqifuawmUtcktcsdefxdta&SUaNrmufacgif;rapmif;ao;ygbl;?'gayrJ Uowdqdkwmydkw,fr&Sdygbl;? tcsdef&SdwHk;usL;ypfawGa&;Muovdk vkyfoifUvkyfxdkufwmtukefvkyfxm;wm rrSm;ygbl;/ uGsefawmfuawmU bm&,fnm&,fr[kwfygbl;?[dkaeUu wuGufwdk;vdkUNym;aNcmufq,fpm;yD;ygbD/awmifUxm;ygr[mqifa&? aemufxyf12em&Davmuf/ta&SUbufudk b,fbufrqdkacgif;apmif; rvmygeJU?usefwJUbufMudKufwJUbufudkoGm;yg? r[mqifa&? 15&ufaeUrSbJb*Fvm;a'UbufNzwfrvm;? tdef'd,bufNzwfrvm; tJ'DaeUaygufwJUaps;eJU wyGJESGJygOD;r,f/uGsefawmUtxifawmU tdef'd,bufudkr[mqifoGm;r,fxifaeygw,f/ tdef'd,u qif qdk&iftvGefcifMuwmyg/tdef'd,bk&m;ausmif;awGxJ qifyHkawGtrsm;MuD;ygcifAsm/NrefrmNynfuvlawGab;uif;edkifMuygap/ )
tvdk tvdk ? ydkUpfwifNyD;vdkU15rdepf&Sdao;w,f?r[mqifuta&SUaNrmufudkpcsdK;NyDvdkUowif;rSmawGUae&ygb D/b,favmufcsdK;ovJawmUaocsmrodao;bl; csdK;wmawmUcsdK;NyDq&mwdkUa&?udk[D&dk;;;;;;;;;;;;? AsdK;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; udk[D;&dk;a& vkyfygOD;tyf'dwfav;?bk&m;bk&m;?aemufudkr[mqifeJUravmif;awmUygbl;?eJeJawmUudwfp&SdNyDxifygw,f? r[mqifuawmUvkyfcsvdkufNyefbDAsm?armif&Snf&dkU ?ara&S&dkU? MuD;a&S&dkUa&? pdkufawGNrdKUu&D;buf udk r[mqifu&D; 0SD;vmyD ?owif;OD;odedkifwJUvlawG tyf'dwfav;awGrSefrSefvkyfay;MuygcifAsm?
Last edited by redhat; 05-14-2013 at 02:32 PM.
BH, brokenworld, daylight, devilgrin89, fridayborn, heronaing, Hollinaz, honelay86, icy, k-pooh, KM Wai, ko too, lazyguylay, Lynn Eainthu, mgmgthan, MNO.BN, nyanmoe, oowatoke, peace777, PiNyat, RunAtServer, Salone, shadow69, sweetee, talltar, TUN2N, yokesoe, zzz
05-14-2013 02:36 PM #38
ယနေ့ည့ (06:30:00) နာရီတိုင်းထွာချက်များအရ။
အများကခန့်မှန်းထားသလိုပဲ့၊ Mahasen ကတော့ကွေ့ကာဝိုက်ကာနဲ့မြန်မာပြည်ဘက်ကို
မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်ဟာ ဟိုင်းကြီးကျွန်းအနောက်ဘက်တည့်တည့် (480)မိုင်ခန့်။
အနွီယနိုင်ငံ Nellore မြို့အရှေ့ဘက်(417)မိုင်ခန့်အကွာကိုဗဟိုပြုပြီး ။
ခန့်မှန်းချက်များအရ မုန်တိုင်း Mahasan ဟာ 16 May 2013 မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ(05:00:00)
နာရီခန့်တွင် Bangladesh နိုင်ငံ Chittagong Division ရဲ့ Chittagong မြို့တည့်တည့်ကိုဖြတ်ကျော်
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကိုမုန်တိုင်းစတင်သက်ရောက်နိုင်သည့်အချိန်ကတော့ 16 May 2013 ရက်နေ့
နံက် (04:00:00) နာရီအချိန်ခန့်တွင်စတင်သက်ရောက်နိုင်ပြီး ထိုနေ့မွန်းတည့် (12:00:00) နာ
နောက်ထပ်အသေးစိတ်ခန့်မှန်းချက်ကို မုန်တိုင်းနီးလာသည်နှင့်အမျှအဆက်မပြတ်တင်ပေးသွား
Date : 14 May 2013 1200Z(မြန်နာစံတော်ချိန်ည( 6:30:00)ချိန်တိုင်းထွာချက်။
Location : 14:47:19 N : 86:11:47E
Movement : 9mph
Maximum Win Speed :50 mph
Minimum central pressure : 989 hPa
Maximum significant wave height : 17 FEET
ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်ဖြူမြို့မှာ 14 May 2013 မနက် (11)နာရီလောက်မှာမိုးတွေချိန်းပြီးအခုလိုမိုးတွေရွာသွန်း
abya, academy, adaptor, AHHA, allienworld, badinf, bago, BananaBoy, BH, Botazan, brokenworld, daylight, DD85, DrJones, frank, fridayborn, Grace, GuruAM, honelay86, icy, Jim, jim beam, julykoko2009, k-pooh, kaungkin02, KM Wai, ko too, Lynn Eainthu, MgLeo, Mini_Me, MNO.BN, Mod8, Ngwe Zinyaw, nijinsky, nnnaing, nyanmoe, pinkladylay, PiNyat, redhat, RunAtServer, shadow69, shankalay2007, sweetee, talltar, taurus22, thatonthu, thitmin, TUN2N, turtle81, yokesoe, zzz
05-15-2013 04:41 AM #39
(Topical Cyclone Mahasen)Update.(မဟာစင်မုန်တိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်နော က်ဆုံးရသတင်းများ)
ယနေ့နံက် (06:30:00) နာရီတိုင်းထွာချက်အရ။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမဟာစင်ဟာလက်ရှိ (16:00:09)N နှင့် (87:04:47)E နေရာကိုဗဟိုပြုပြီး
မဟာစင်ဟာ အားတော့သိပ်မကြီးလာတာကတော့ထူးဆန်းနေသလိုပဲ့အခုနောက်ဆုံးတိုင်းထွာ
Date : 15 May 2013 0000Z(မြန်နာစံတော်ချိန်နံက်( 6:30:00)ချိန်တိုင်းထွာချက်။
Location : 16:00:09 N : 87:04:47E
Movement : 11mph
Direction : NNE
တွင်မုန်တိုင်းရဲ့မိုးဒါဏ်လေဒါဏ်လူဦးရေ (8.2)သန်း(မြန်မာနိုင်ငံ၊ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံနှင့်အနွိယ နိုင်ငံ)တို့ခံစားရမည်
ဖြစ်သည်။ထိုဒေသတွင် Heavy Rain Area အဖြစ်မိုးရေချိန် (3 to 6)inches/hr over ရွာသွန်းနိုင်ပါသည်။
မုန်တိုင်းတခုဖြစ်လာပြီဆိုလျှင်ပင်လယ်ထဲကရေငွေထုတွေကိုသယ်ယူပြီးတော့မိုးတိမ်တောင်တို့ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ရင်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းတတ်သလိုမိုးရွာသွန်းချိန်ဟာ တချို့နေရာတွေမှာ(24)နာရီမပြတ်ရွာသွန်းတတ်ပါတယ် ။
ထိုကဲ့ရွာသွန်းခြင်းကြောင့်မြစ်ရေလျှံတက်ခြင်း၊မိုးေ ရတွန်းကျမှုကြောင်းတောင်ပြိုခြင်း၊မိုးရေကြောင့်မြေသားကျွံကျ
မုန်တိုင်းတခုမှာမိုးတိမ်တောင်တွေမုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုမှာဘယ်လောက်အမြင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသထားတဲ့ပုံပါ။ ကီလို
ပုံမှာ TRMM Precipitation Rader တိုင်းတာချက်အရ (15.5)Km အမြင့်လောက်ရှိတဲ့တိမ်တိုက်ကြီးဟာမဟာစင်
ပုံမှန်အားဖြင့် 747 ဂျက်လေယာဉ်ပုံကြီးတစင်းဟာမြေပြင်မှ (5)မိုင်လောက်အကွာမှပျံသန်းတတ်ပါတယ်။
သိရိလကာနိုင်ငံမှာမဟာစင်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူပေါင်း(1600)ကျော်ရေလွမ်းမိုးမှုခံစားရပြီးေ တာ့
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကလည်းအခုလိုမိုးထဲလေထဲမှာသွား ရောက်ပြီးလာမည့်မုန်တိုင်းကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်
abya, adaptor, AHHA, allienworld, bago, batoe, BH, blooom, Botazan, bts, CupidBoyz, daylight, domeno, DrJones, frank, fridayborn, Grace, greenwood, GuruAM, honelay86, icy, jelly13, Jim, julykoko2009, k-pooh, kaungkin02, KaungKinPyar, khit, KM Wai, ko too, Kohtut, koshwemung, Lady, LU SHAY, Mg Khin Gyi, MgLeo, Mini_Me, MNO.BN, Mod8, mokenlay, nijinsky, nnnaing, nyanmoe, Peach, pinkladylay, PiNyat, redhat, RunAtServer, shadow69, shankalay2007, silence, talltar, taurus22, THARGYII, thatonthu, thawzin, thitmin, thuyalin2006, TUN2N, Ygn Robert, zzz
05-15-2013 02:42 PM #40
nckeSpfem&DwGDAGDowif;rSmawmUaemuf18em&DtwGif; reufzefarv 16&ufaeUreuf10em&D avmufudk ppfwaumif;eJUarmifawmMum;uae ukef;wGif;ydkif;udk0ifygawmUr,f/ uGsefawmfwdkU bwfum;ay:rSm ausmaumUatmif um;wdk;pD;&rJUtcsdefrSmbJ? armifawmeJU ppfwaumif;uvlawG ausmaumUatmif rkefwdkif;'PfcH&rSmyg/ r [mqif bJNzpfNzpf? udk[mqifbJNzpfNzpf ?tDqGwfNzpfNzpf ,lEGwfNzpfNzpf pGyfy&m;NzpfNzpf bdkU[J tNcm;edrf; atmifazanmif;ygawmU r[mqifa&? tckwacgufuMudKwifNyifqifrIawGaumif;ygw,f/b,folrSydk;pdk;yufpuf rNzpfMuygapeJUcifAsm/ rkefwdkif;eJU tawmfa0;wJUuGsefawmfwdkUawmif3&ufavmufaoG;avaNcmuf Ncm;&ygvm; udk[mqifa&?
bts, domeno, Grace, heronaing, honelay86, htethtetmoeoo, icy, Jim, ko too, mgknow, MNO.BN, Peach, PiNyat, RunAtServer, Ye Win Soe, yokesoe